Alcatel A3 ee MWC 17 | Androidsis
Alcatel A3 ee MWC 17
Alfonso ee Miraha | | MWC
https // www.youtube.com / watch? v = vmONbafYS-g
Waxaan horeyba kaaga soo sheegnay Alcatel A5 LED, aalad u taagan xiisaha ay leedahay guddiga ogeysiiska gadaal. Hadda waa markiisii Alcatel A3, Taleefan qayb ka noqon doona kala-geynta kala-guurka ee dhex-dhexaad ah oo leh waxyaabo lala yaabo aad u xiiso badan
Waxaan fursad u helay inaan ku tijaabiyo MWC 2017 markaa hada waxaan kuu keenay tayda dareenka ugu horreeya ee leh Alcatel A3.
1 Taleefan fudud marka la eego qaabeynta
2 Astaamaha farsamada ee Alcatel A3
Taleefan fudud marka la eego qaabeynta
Alcatel A3 waa taleefan dhex-dhexaad ah, kama hadlayno qalab weyn. Oo sidii la filayay, qaabkeedu waa caadi. Ma jiraan wax cajiib ah oo arrintan la xiriira, taleefan caadi ah.
Jidhkeedu wuxuu ka samaysan yahay polycarbonate wuxuu ku fiicanyahay gacanta waana ku fiicanyahay taabashada. Ogsoonow in meertada ku hareeraysan terminalka laga sameeyay aluminium, iyadoo siineysa Alcatel A3 muuqaal wax yar ka sarreeya.
Fureyaasha xakamaynta mugga iyo kan iyo marka laga baxo waxay bixisaa waddo ka badan sax iyo iska caabin ku filan. Taasi waxay tiri, naqshad sax ah oo loogu talagalay terminaalka baaxaddan.
Astaamaha farsamada ee Alcatel A3
Waxaan ka hadlaynaa qalabka ay Alcatel A3 ku rakibtay. Xaaladdan oo kale waxaan ka helnaa shaashad ay sameeyeen guddi leh xagal of 5 inji oo gaara xalka HD. Sida laga yaabo inaad ku aragtay muuqaalkeena ugu horeeya ee muuqaalka ah, shaashadda Alcatel A3 waxay uqabataa sifiican, waxay bixisaa midabbo muuqda oo fiiqan iyo xagal daawasho in kabadan.
Oo halkan waxaan ku galaynaa faahfaahin aan aad u jeclaaday waana tan afhayeenka hore taas ayaa leh tan Alcatel A3. Xaqiiqdii waxaa jira laba sameecadood, oo ku yaal xagga sare iyo hoose ee taleefanka oo bixiya tayo cod leh oo hufan, oo kugu martiqaadaya inaad ku raaxaysato waxyaabaha ku jira warbaahinta badan.
Ku sii wadida astaamaha intiisa kale, MediaTek ayaa mas'uul ka ahayd keenista taleefankan mid ka mid ah xalalkeeda ugu caansan. Waxaan ka hadlayaa SoC MTK 6737 afar geesle ah, oo ay weheliso 1.5 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo keydinta gudaha ah, oo dhameystiraya qalab aad u kooban.
Waxaan tijaabinayay taleefanka mana aanan la kulmin wax nooc ah LAG ama istaag inta lagu guda jiray isticmaalkiisa, taleefanka ayaa si xawli leh ugu dhaqaaqay daaqadaha kala duwan, laakiin waxaan horeyba kuugu sheegayaa inaadan awoodin inaad ku ciyaarto ciyaaro aad uxun. Alcatel A3 maaddaama codsiyadaas u baahan culeys garaaf badan ay shaki la'aan taleefankan ku hafan doonaan.
Waxaan horeyba kuugu sheegay inay ahayd meel dhexaad ah, sidaa darteed ma fileyn karno qalab aad u buuq badan. In kasta oo Alcatel uu hayo wax lala yaabo: the 13 megapixel kamarad weyn kaas oo ay A3 leedahay taasna runtii way fiican tahay. Waxaan ku sameeyay tijaabooyin qolka yar kamaraduna si fiican ayey u shaqeysay.
Tan waa inaan ku darnaa a 5 megapixel kaamirada hore oo leh flash qaadashada sawirada ama sawir gacmeedyo xaaladaha iftiinka yar. Faahfaahin kale oo xusid mudan waa xaqiiqda ah in Alcatel A3 uu leeyahay dareeraha faraha. Ma aanan helin fursad aan ku tijaabiyo shaqadeeda, laakiin xaqiiqda ah inay la timaaddo dareeraha aaladda cilmiga biometric-ka ayaa lagu daray.
Ugu dambeyntii waxaan leenahay batari ah 2.460 Mah, in ka badan oo ku filan si loo taageero miisaanka buuxa ee qalabka taleefankan. Weyn laakiin? Taasi Alcatel A3 wuxuu la shaqeeyaa Android 6.0 M, markii ay ahayd inuu horeyba ula yimaado nuuca ugu dambeeyay ee nidaamka qalliinka Google
Weli waxaa jira laba bilood illaa May, marka Alcatel A3 oo suuqa ku jira qiimo dhan 159 euro. Waxaan rajeyneynaa inta lagu jiro waqtigan in la diyaariyo casriyeyn ku socota Android 7.0 Nougat maxaa yeelay waxay noqon kartaa cunsur in la tixgeliyo. Inbadan haddii aan xisaabta ku darno in qiimahaas kala duwan waxaan leenahay xalal aad u xiiso badan, sida Mogo G4, iyo inay la yimaadaan Android 7.0.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » MWC » Alcatel A3 ee MWC 17
Xiiso leh! Terminalka udub dhexaadka ah, wuxuu hayaa faahfaahin ka dhigaysa mid muuqda, sida kamaradda weyn ee 13mpx ama akhristaha sawirka faraha. Sidoo kale, waxay leedahay naqshad wanaagsan, waan jeclahay.
Ku jawaab Sonia
iPhone 7 Plus vs LG G6, shaashadda shaashadda
Alcatel A5 LED aragtidiisii ​​ugu horreysay ee MWC 2017